Swimming Pool chlorine, kwisigcinakaliso, zintsholongwane - Maochen
Biocides kunye neAlgicides
Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. inkampani iqela a, ugxininise imichiza pool Swimming; Bactericides (Biocides) / kwisigcinakaliso, iimveliso Amalahle njalo njalo. Mveliso izinze Weifang, kwiPhondo Shandong, China. Iminyaka engaphezu kwama-15 amava kushishino weekhemikhali, Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. yenye inkulumbuso zabathengisi-zintsholongwane e-China. Njengomvelisi ethembekileyo ezaziwayo, sivelisa kunye kumazwe onke ehlabathini. abathengi bethu evela Australia, kwaSirayeli, empuma ye, Mid-mpuma, EUR, US, Mexico, Chile etc, kumazwe angaphezu kwama-20.
Trichloroisocyanuric acid 90% Icwecwe (TCCA)
Trichloroisocyanuric acid Multi tablet (TCCA)
Biocides & kwisigcinakaliso (CMIT / mit)
Njengoko zintsholongwane for swimming pool, nemithombo eshushu, ama Spa; Aquaculture, isiziba yeentlanzi; yokucoca amanzi Industry, bume ubomi njalo
Njengoko zintsholongwane for swimming pool; amanzi Industry, amanzi, zibe mhlophe, bume ubomi njalo uyasela on.
Ukuba ngokubanzi kusetyenziswa zintsholongwane, mhlophe arhente okanye oxidant ebangela ukuba yokudada-pool, amanzi okusela, kwinqaba & amdaka edolophu kunye namanzi amdaka okupholisa njl
Kwiminyaka engaphezu kwama-15 amava
Biocides & kwisigcinakaliso
Inombolo yomnxeba: 0086 531 -83267585
Whatspp / Ihlokondiba: 0086 13605417941
Development Zone loQoqosho, Hanting sasaz, Weifang, Shandong, China
© Copyright - 2010-2019: Onke amalungelo agciniwe. Weifang Maochen Chemical Co., Ltd.
Products afakiwe , Sitemap , Mobile Site